Saxariirta ay shirkadda dhiig-miiradka ah ee SAHAL ku hayso shacabka safraya oo heer cusub gaartey (Arag dhibaatadan) | Hadalsame Media
Maxay warbaahinta caalamku ka tiri khilaafka Farmaajo & Rooble?
Shirkad ka mid ah kuwa ugu waayayn Galbeedka oo lagu helay…
”Waxaan nahay walaalo!” – 3 dal oo Muslim ah oo markii…
Xogo aad uga duwan kuwii hore oo kasoo baxaya sababta ay…
Shirkadda Turkish Airlines ee Muqdisho iman lahayd oo Jabuuti ka degtey…
XOG: Ingiriiska oo Golaha Amaanka ka codsaday in kulan gaar ah…
DAAWO: Dal ku yaalla Bariga Afrika oo sameeyey basas koronto ku…
Home Maqaallada Saxariirta ay shirkadda dhiig-miiradka ah ee SAHAL ku hayso shacabka safraya oo...
Saxariirta ay shirkadda dhiig-miiradka ah ee SAHAL ku hayso shacabka safraya oo heer cusub gaartey (Arag dhibaatadan)
(Muqdisho) 12 Dis 2020 – Dhacaba dhaqan-xumadaa iiga daran! Meel garoonka diyaaradaha Aadan Cadde (Muqdisho) u jirta qiyaastii 13km ayaan aniga iyo carruurteyda laba Taxi oo “Rikaab” ah kasoo qaadannay. Markii ay na keeneen xarunta laga raaco basaska Airport-ka aada ee SAHAL, waxa ay i weydiiyeen isku dar, lacag $16 (Toban iyo lix dollar) ah oo uu machine-koodu sheegay. Baabuurtan waxa ay awood u lahaayeen in ay na gaarsiiyaan garoonka, hase yeeshee looma oggola.
Labadaas Taksi waxa ay na soo wadeen 13 Kiilomitir. Meesha ay na keeneen waxaa naga qaadaya bas ay shirkadda SAHAL leedahay, wuxuu na geynayaa garoonka diyaaradaha oo noo jira wax aan ka badneyn nus Kiilomitir, laakiin SAHAL waxa ay naga dooneysaa lacag kale.
Waxaa la ii tilmaamay daaqad yar oo laga goosto warqadda baska lagu raaco. Waxaa dhex fadhiya laba nin oo dhallinyaro ah. Waxa ay i weydiiyeen tiradeenna. Markii aan u sheegay ayey iga dalbadeen lacag dhan $45 (Afartan iyo shan dollar)
“Suurto-gal ma aha, waxaa laga yaabaa in ay isu-geynta xisaabtu kaa qaldantay ee bal ku laabo” ayaan ku war-celiyay. “Waxba igama khaldana” ayuu la soo booday.
“Almiino ciyaalka oo aad kiiba lacag qof weyn ka dooneysid, maad haaf (nus) noo xisaabtid, sababtoo ah diyaaradda ay raacayaanba, waxaa laga qaaday haaf inta dadka waaweyn laga rabo, maadaama ay 12 sano ka yar yihiin” ayaan ku boobsiiyay.
“Sxb waa intaas ee iska bixi lacagta haddii kale daaqadda iiga leexo, dadka kaa dambeeya aan u shaqeeyee” ayuu igu yiri.
Waxaa xusid mudan, in aysan jirin waddo ama qaab kale oo uu qof safar ahi ku gaari karo Airport-ka. Waxaa qasab ah in aad halkan soo marto, lacagta lagaa rabana aad iska bixiso!
Waxaan ogaaday haddii aan lasii doodo in uu waqti iga lumayo, suurto-galna ay tahay in aan diyaaradda seego, khasaare $45 ka badanna aan la kulmo.
Sidaa darteed, waxaan go’aansaday in aan ku dhowaad $50 ku tago meel kiilomitir-barkiis ii jirta.
Xisaabtu waxa ay noqotay, in masaafadaas kiilomitirka ka yar, aan qofkiiba ka bixiyo lacag la eg tii uu Taksigu nooga keenay meel dhowr iyo toban kiilomitir noo jirta (halka baabuur wuxuu nagu keenay $8, waxaana saarnaa 3 qof)
Waxaa intaa dheer, in qof kasta oo ka tirsan shaqaalaha shirkadda SAHAL oo boorsadaada taabta uu ku weydiinayo lacag intan ka baxsan.
Waxaa iigu darneyd markii baska lasoo saaray dad ka badan tirada kuraasta uu baabuurku leeyahay. Dadkii oo qaarkood ay baska dhexdiisa taagan yihiin, kuwo kalena ay dhulka tuban yihiin, ayuu soo fuulay mid kamid ah shaqaalaha shirkadda SAHAL, wuxuuna amar nagu siiyay in carruurta aan kuraasta ka kicinno, dhabtana saaranno, si dad kale ay u fariisiyaan. Ogow, carruurta waxaa laga qaaday lacag lamid ah tan qofka weyn laga qaaday.
Waxaan ku fekeray bal ka warran haddii dhibkan uu ku dhaco (wuuba ku dhacaaye) dad carruur badan wata, haddana aan awoodinba lacagtan xaq-darrada ah.
Nin aan saaxiib nahay oo Muqdisho aad uga warhaya, ayaan waxa igu dhacay uga sheekeeyay. Wuxuu igu yiri “sxb Xamar isbaarooyinkii qoriga wax leysaga qaadan jiray waa la qaaday, laakiin beddelkooda waxaa la dhigay Isbaarooyin qalinka leysku baarto, kuwan ayaana ka dhib badan kuwii qoriga, sababtoo ah kuwii hore waxbaa lakala khabeysan jiray, haddase sheekadaas ma jirto.”
Waxaa Qoray: Jacfar Kuukaay, oo sheegay inuu dhacdadan la kulmay
Previous articleMaxay tahay muhiimadda ay MOOYAALE u leedahay mujtamaca Soomaaliyeed?!
Next article”Geeraarkaagu waa gef qaran” – Iiraan oo aad uga carootey maanso uu akhriyey MW Erdogan (Maxay qoonsatay?)
Shirkad ka mid ah kuwa ugu waayayn Galbeedka oo lagu helay inay malaayiin doollar siisay kooxda Daacish
”Waxaan nahay walaalo!” – 3 dal oo Muslim ah oo markii ugu horreeysey dhoollatus ciidan wada sameeyey (Daawo)
(Hadalsame) 17 Sebt 2021 - Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa xaqiijiyay in maanta ay ka wada xaajoonayaan arrimaha cakiran ee Soomaaliya gaar ahaan...
Xogo aad uga duwan kuwii hore oo kasoo baxaya sababta ay Jabuuti ugu degtey Turkish Airlines
Shirkadda Turkish Airlines ee Muqdisho iman lahayd oo Jabuuti ka degtey + Sababta & Su’aal la is waydiinayo